Mammogram xanuun ma leeyahay?
A mammografi waa raajo oo qiyaas yar oo shucaac ah uga gudubta nudaha naaskaaga. Tijaabadani muhiimka ah waxay caawineysaa in la ogaado koritaanka ka hor inta aysan weyneyn in la ogaado inta lagu jiro baaritaanka naasaha ee billaha ah. Qaar badan oo koritaankan ka mid ah way adag tahay in la helo maadaama ay ku sii dhexjiraan unugyada naaskaaga. Si kastaba ha noqotee, helitaanka koritaanadan goor hore waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad u fudud in la daaweeyo. Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, dhaqaatiirtayadu waxay u isticmaalaan tijaabada labadaba qalab baaris ama mid baaritaan marka aan ogaanno waxyaabo gaar ah inta lagu jiro baaritaankaaga sanadlaha ah ee dumarka. Haweenka nudaha cufan ee cufan ayaa laga codsan karaa inay yeeshaan raajada naasaha si ay u hubiyaan inaan goor hore ka heli karno wixii dhibaato ah ee iman kara.
Noocyada raajada naasaha
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaa jira laba nooc oo ah raajada naasaha:
Baadhitaanka: Baaritaanka raajada naasaha ayaa lagu ogaadaa dhibaatooyinka goor hore.
Baarista: Raajada baaritaanka naasaha waxaa lagu sameeyaa markaan ogaanno dhibaato. Waxay bixin kartaa aragtiyo dheeri ah oo lagama maarmaan u ah baaritaanka saxda ah.
Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka, waxaan dalbanaa baaritaanka mammogram marka bukaanadayagu dareemaan dheecaan aan caadi ahayn, korriin aan la sharraxin ama ku sii kordhayo naaska nudaha kilkisha, maqaarka naaska oo ku yaraada, isbeddelada ku dhaca ibta, burooyin xanuun badan, damqasho, ama wax isbedelka cabirka naaska. Markaad la kulanto xanuun, dheecaan, ama calaamado cabsi leh, ballan ka qabso xafiisyadeena Columbus, Dublin, ama Westerville, OH. Fadlan la soco inaad ku baari kartid mid ka mid ah seddexdeena meelood, laakiin waxaan kaliya ku qabannaa mammografi xafiiskayaga Columbus, OH.
Ma jiro baahi da 'dhab ah oo looga baahan yahay samaynta raajada mammogram maadaama dhakhaatiirteennu ay go'aamiyaan waqtiga iyadoo ku xidhan qof caafimaadkiisa, taariikhda qoyskiisa, iyo arrimo kasta oo khatar keeni kara. Waxyaalaha halista ah ee kordhiya fursadahaaga kansarka naasaha waxaa ka mid ah:
Helitaanka caadadaada waqti hore
Taariikh qoys oo ku saabsan kansarka naasaha
Cillada joojinta caadada oo dambe
Baaritaanka aasaasiga ah ee mammogram waxaa lagula talinayaa sanadkiiba hal mar kuwa da'doodu u dhaxeyso 35 - 39. Kuliyadda Dhaqtarka iyo Dhakhaatiirta Haweenka ee ku takhasustay Ameerika ayaa kula talinaysa in qof kasta oo ka weyn 40 jir uu sameeyo mammogram sannad kasta.
Raaxo mammogram ma dhaawacdaa?
Ma jirto jawaab dhab ah oo adag oo tan la mid ah maadaama qof walba uu soo arko mid ka duwan. Qaar ka mid ah bukaannadeennu waxay la kulmaan xanuun inta lagu jiro howsha, halka kuwa kale aysan waxba dareemin. Haweenka badankood, si kastaba ha noqotee, waxay xusaan raaxo la'aanta ay keento cadaadiska naasahooda ee mashiinka. Tani badanaa waxay qaadataa dhowr daqiiqo. Heerka xanuunkaagu wuu kala duwanaan doonaa iyadoo kuxiran cabirka naasahaaga, waqtiga baaritaankaaga iyo caadadaada, iyo meelaynta raajada naasaha (waxay kuxirantahay baaritaankaaga).
Naasaha miyaa la xanuunaa mammogram ka dib?
Dhakhaatiirteenu ma balan qaadi karaan sida bukaankeenu u dareemayo raajada mammogram ka kadib. Si kastaba ha noqotee, bukaankeena badankood ma dareemaan nabar ama xanuun. Markaad ka walwalsan tahay khibradaada, khubaradayada naaska ayaa ku siin kara fursad aad ku isticmaasho MammoPad®, oo ah barkinta naaska hal mar la isticmaalo. Barkimadani waxay siisaa dusha ka ilaalin jilicsan oo diirran inta udhaxeysa naasahaaga iyo mashiinka sawirka naaska. Tani waxay ka dhigi kartaa waayo-aragnimadaada mid raaxo leh.
Baro sida loo raaxeeyo inta lagu jiro mammogramkaaga
Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka, waxaan u isticmaalnaa raajada mammograamka qalab baaris iyo hab lagu ogaado dhibaatooyinka. Kooxdayadu way ka jawaabi karaan su'aalo kasta oo aad ka qabto ku saabsan samaynta raajada naasaha, oo ay ku jiraan intee in le'eg ayuu dhaawaca raajada mammograamku leeyahay Si aan ula ballansanno kooxdeena baaritaanka naasaha, call xafiiskayaga Columbus, OH maanta.
Goobta Columbus Goobta Westerville Goobta Dublin Mammografi